शीर्ष नेताहरु कहाँ—कहाँबाट चुनाव लड्ने तयारी गर्दै छन् ? – Online National Network
शीर्ष नेताहरु कहाँ—कहाँबाट चुनाव लड्ने तयारी गर्दै छन् ?
२७ भाद्र २०७४, मंगलवार ०२:३३
काठमाडौं, २७ भदौ – कांग्रेस शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी थालेका छन् । तर, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका नेताहरूले खुलेर निर्वाचन क्षेत्रको घोषणा गरेका छैनन् ।
डडेल्धुरा नछाड्ने पक्षमा देउवा
तनहुँमा पौडेल तानातानमा
महामन्त्री शंशाक पुरानै ठाउँमा लड्दै
क्षेत्र निर्धारण गर्दा नवलपरासीलाई दुईवटा जिल्ला बनाइएको छ । कांग्रेस महामन्त्री डा। शशांक कोइरालाले २०६४ र २०७० सालको संधिानसभा निर्वाचनमा जितेको नवलपरासी १ बाटै फेरि पनि निर्वाचन लड्ने तयारी गरेका छन् । नवलपरासीको पूर्वी भाग अर्थात् नवलपुरको क्षेत्र नम्बर १ बाटै कोइरालाले निर्वाचन लड्ने तयारी गरेको कांग्रेस जिल्ला सभापति विष्णु लामिछानेले जानकारी दिए ।
कांग्रेस कोषाध्यक्ष पनि पुरानै क्षेत्रमा
कांग्रेस कोषाध्यष सीतादेवी यादव सिरहा ३ बाट निर्वाचन लड्ने तयारीमा छिन् । क्षेत्र निर्धारण हेरफेर हुँदा ३ का केही भाग २ मा र ५ को केही भाग ३ मा हालिए पनि पहिलेकै क्षेत्र नम्बर ३ कायम भएको जानकारी यावदले दिइन् । ‘केही गाउँपालिका र नगरपालिका हेरफेर भए पनि ३ नम्बरबाटै निर्वाचन लड्ने तयारीमा छु,’ उनले भनिन् ।
अधिकांश प्रभावशाली नेता पुरानै क्षेत्रबाट लड्ने पक्षमा
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पूर्वमहामन्त्रीहरू प्रकाशमान सिंह काठमाडौं १, कृष्ण सिटौला झापा ३, डा। शेखर कोइराला मोरङ ७, विमलेन्द्र निधि धनुषा ३, अर्जुननरसिंह केसी नुवाकोट १, डा रामशरण महत नुवाकोट ३, गगन थापा काठमाडौं ४ बाट निर्वाचन लडेर निर्वाचन जितेका थिए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने क्षेत्र रोज्दै एमाले शीर्ष नेता
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले झापा ५ बाट संघीय संसद्को निर्वाचन लड्ने मनस्थिति बनाएका छन् । ओलीको गृहनगर दमक पनि यही क्षेत्रमा पर्छ । गौरादह, लखनपुर, तोपगाछी, गौरीगन्जजस्ता नगरपालिका र गाउँपालिका पर्ने ती क्षेत्र एमालेको ‘पकेट क्षेत्र’ मानिन्छन् । झापाका नेता–कार्यकर्ताको सुझाबका आधारमा ओलीले ५ नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने मनस्थिति बनाएको उनको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले इलाम–१ बाट पाँचपटक निर्वाचन जितेका छन् । संघीय संसद्को आउँदो निर्वाचनमा दोस्रो ह्याट्रिक गर्ने गरी खनालले सोही क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरेका छन् ।
नेता माधवकुमार नेपालले काठमाडौं र रौतहटका तीनवटा क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरिरहेका छन् । तीनवटै क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने दबाब रहेकाले उनले कुनै निर्णय लिइसकेका छैनन् । ‘काठमाडौं–२, रौतहट ४ र १ मध्ये एउटा क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने उहाँको तयारी छ,’ नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले भने, ‘अब छिट्टै निर्णय लिनुहुनेछ ।’ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र प्रभावका हिसाबले नेपालले पुरानो क्षेत्र काठमाडौं–२ बाटै चुनाव लड्दा सबैभन्दा उत्तम हुने भन्दै नेता–कार्यकर्ताको दबाब छ ।
नेपालको गृहनगर गौर रौतहट १ मा पर्छ । गौर नगरपालिकालाई एमालेको ‘पकेट क्षेत्र’ मानिए पनि ६–७ वटा साबिकका गाविस भारतसँग जोडिएको दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने भएकाले पनि नेपालले स्वयंले ती दुई क्षेत्रप्रति बढी रुचि देखाएका हुन् । नेपालले अघिल्लोपटक रौतहट–१ बाट जितेका थिए ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बर्दिया र प्युठानमध्ये एक ठाउँबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरेका छन् । दुवै जिल्लाका नेता–कार्यकर्ताको तीव्र दबाब रहेकाले आफूले तत्काल निर्णय नलिएको गौतमको भनाइ छ । ‘दुईमध्ये एउटा जिल्लाबाट लड्छु, मैले निर्वाचन लडेँ भने दुवै जिल्लाको १ नम्बर क्षेत्रबाटै लड्छु, छलफल गर्न बाँकी छ,’ गौतमले भने, ‘जुनसुकै क्षेत्र छाडे पनि त्यहाँ कसलाई उठाउने सोच्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण सजिलो छैन, पार्टीले नै निर्णय गर्नुपर्छ, म पनि छिट्टै निर्णय गर्दै छु ।’
महासचिव ईश्वर पोखरेलले कुनै निर्णय नलिइसके पनि पुरानै काठमाडौं–५ नम्बरबाट लड्ने सम्भावना देखिएको उनीनिकट ३ नम्बर प्रदेश संगठन कमिटीका सदस्य नारायण सिलवालले बताए ।
पदाधिकारीहरूको रोजाइ पुरानै क्षेत्रमा
उपाध्यक्ष भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पुरानै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने तयारीमा छन् । सचिव योगेश भट्टराईले काठमाडौं ६ वा ताप्लेजुङबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरेका छन् । त्यस्तै, स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेले पनि पुरानै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
धेरैजसो माओवादी नेता आ–आफ्नै गृहजिल्लाबाट उठ्ने तयारी
वीरेन्द्र ओलीरमाओवादी केन्द्रका अधिकांश शीर्ष नेता प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आ–आफ्नै गृहजिल्लामा उठ्ने तयारी गरेका छन् । तर, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाहेक कुनै नेताले जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गरेका छैनन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड चितवन ३ बाट निर्वाचनमा उठ्ने भएका छन् । उनको मतदाता नामावली भतरपुर महानगरपालिका–४ लंकुमा छ । प्रचण्ड पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा २ र काठमाडौं १० बाट निर्वाचित भएका थिए । उनी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं १० र सिरहा ५ बाट उठेका थिए ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ गोरखा
रामबहादुर थापा पनि चितवनबाटै
कृष्णबहादुर महरा दाङ वा रोल्पा
माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा रोल्पा वा दाङ २ बाट उठ्ने तयारी गरेका छन् । महरा पराराष्ट्रमन्त्री हुँदा नेता वर्षमान पुनसँग भएको समझदारी कार्यान्वयन भएमा दाङ २ बाट उठ्नेछन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा महरा दाङ ३ र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा २ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
वर्षमान पुन रोल्पा
नेता वर्षमान पुन अनन्त रोल्पाबाट उठ्ने तयारी गरेका छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए । तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मोरङ ९ बाट पराजित भए ।
जनार्दन शर्मा पश्चिम रुकुम
माओवादी नेता जनार्दन शर्माले पश्चिम रुकुमबाट उठ्ने तयारी गरेका छन् । शर्माको मतदाता नामावली पश्चिम रुकुमको मुसिकोट नगरपालिकाको श्रीगाउँमा छ । उनी पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा रुकुम २ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँचीबाट
नेता टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँचीबाट निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । यसअघि अर्घाखाँची जिल्लामा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र थिए । अहिले एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । उनी अर्घाखाँची १ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
पम्फा भुसाल ललितपुर
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले ललितपुर ३ बाट निर्वाचनमा उठ्ने तयारी गरेकी छन् । उनी यसअघि पनि ललितपुरबाटै निर्वाचन लड्दै आएकी छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भुसाल ललितपुर ३ बाट निर्वाचित भएकी थिइन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीमा आबद्ध थिइन् । वैद्य माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गरेकाले भुसाल निर्वाचन लड्न पाइनन् । (नयाँ पत्रिका दैनिक)बाट निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन् । — नयाँ पत्रिका दैनिक